Inogona Kudya Muchina, Zvibereko Muto Muchina, Tomato Sauce Machine - JUMP
Imwai Kugadzira Line
Chikafu Chekugadzira Line
Jam Namira & Syrup Mutsara
Kubika Kuomesa & Kupisa
Kuzadza Kuiswa Simbiso & Kurongedza
Kusanganisa Sterilizating & Kuumba
JUMP MACHINERY (SHANGHAI) LIMITED ndiyo yemazuva ano yepamusorosoro majoini-emabhizimusi emabhizimusi, aimbove ari Shanghai Chiedza Makambani Mashini Fekitori, iri kushandisa mukutendeuka kiyi yekugadzirisa tambo yeiyo yakadzika michero muto, jamhu, pulp, tropical michero kugadzira, kupisa kuzadza michero yemuto wemichero, miriwo kana zvinwiwa zvetii, zvinwiwa zvine Carbonated, yogati, chizi uye mukaka wemvura unogadzira mukaka. Vashandi vedu vane hunhu hwakanaka kwazvo, uye mainjiniya ehunyanzvi, mahunyanzvi uye vashandi veR & D vari zvakananga kubva kune yekutanga fekitori michina yezvikafu, zvakare vane huwandu hwevatenzi uye Ph. D yezvigadzirwa zveinjiniya uye michina yekupakata, saka isu takashongedzerwa zvakakwana pamwe nzwisisika kugona kwekugadzira uye kuvandudza iyo yese chirongwa, kugadzira, kumisikidza Commissioning, technical technical, mushure mekutengesa sevhisi uye zvimwe zvinhu.
Tomato Sauce Muchina
Zvibereko Juice Machine
Inogona Chikafu Machine
Midziyo yemukicheni inoreva midziyo nemidziyo inoiswa mukicheni kana pakubika. Midziyo yekicheni inowanzo sanganisira yekubikisa yekupisa michina, yekugadzirisa michina, disinfection uye yekuchenesa yekugadzirisa michina, yakajairwa tembiricha uye yakaderera tembiricha yekuchengetedza michina. Iyo kicheni inoshanda nzvimbo dzekudyira indasitiri dzakakamurwa kuita: chikafu chekudya chekuchengetera, isiri-yekudya chikafu chekuchengetera, yakaoma zvinhu yekuchengetera, salting room, pastry room, snack room, inotonhorera dhishi imba, yekutanga kugadzira imba ...
Apple, peya, mazambiringa, po ...
Apple, peya, mazambiringa, pomegranate yekugadzirisa muchina uye yekugadzira mutsara yakakodzera yekugadzirisa apuro, peya, mazambiringa uye pomegranate. Inogona kuburitsa yakajeka muto, turbid muto, yakanyatsoiswa muto, muchero upfu, michero jamu. Iyo tambo yekugadzira inonyanyo kuverengerwa neScraper erevheta, bubble cleaner, bharashi rinoshenesa, preheater, precooking muchina, crusher, beater, juicer, bhandi juicer, yakatwasuka sikuru centrifuge, butterfly centrifuge, ultrafiltration michina, filtration michina, resin adsorptio ...
Maorivhi, plamu, bayberry, ...
Olive, plum, bayberry, peach, apricot, plum kugadzira muchina uye yekugadzira mutsara inokodzera kugadziriswa kwemuorivhi, green plum, bayberry, pichisi, apurikoti uye plamu. Inogona kuburitsa muto wakajeka, turbid muto, yepakutanga pulp, yakanyatsoiswa muto, yakanyatsoiswa pulp, michero yeupfu, michero jamu, michero vhiniga uye zvimwe zvigadzirwa. Olive, plum, bayberry, pichisi, apurikoti, puramu inogadzira muchina uye yekugadzira mutsara inowanzo kuvezwa yekuchenesa muchina, erevheta, UV sterilizer, nyukireta inobvisa, beater ...
Bhabheri, bheribheri, ...
Bhurubheri, bheribheri, mulberry, sitirobheri, rasipibheri, tsvuku bayberry, cranberry kugadzira muchina uye yekugadzira mutsara inogona kuburitsa yakajeka muto, turbid muto, muto we concentrate, muchero upfu, michero jam uye zvimwe zvigadzirwa. Iyo yekugadzira mutsetse inonyanya ine inobhuya yekuwacha muchina, erevheta. , muchina wekutarisa, bhegi remhepo juicer, enzymolysis tank, decanter, ultrafilter, homogenizer, degassing muchina, muchina wekudzivirira, muchina wekuzadza, Mushini wakajairika uye zvimwe zvigadzirwa zvemidziyo. Izvi ...
Inogona kuburitsa yakajeka muto, turbid muto, yakanyatsoiswa muto, muchero upfu, michero jamu. Iyi tambo inosanganisira bubble yekuchenesa muchina, hoist, sarudzo muchina, brashi yekuchenesa muchina, wekucheka muchina, precooking muchina, peeling uye denudation muchina, crusher, bhandi juicer, separator, yevasungwa michina, sterilizer uye yekuzadza muchina, nezvimwe. Iyi tambo yekugadzira yakagadzirirwa ne yepamberi pfungwa uye yakakwirira degree of otomatiki; Iyo hombe midziyo yese inogadzirwa yemhando yepamusoro simbi isina simbi, wh ...
Diki Yoghurt Midziyo
Izvo zvigadzirwa zve yoghurti pamusika zvakanyanya zve ...
Zvibereko Nemiriwo ...
Chigadzirwa chekupedzisira: michero yakaomeswa upfu, yakaomeswa v ...
Kwakachena Mvura Prodution M ...
yakachena mvura yekuchenesa muchina kuyerera: Mbishi mvura → ...
Carbonated Chinwiwa An ...
Carbonated zvinwiwa, izvo zvikuru zvinoshandiswa zvinosanganisira ...
Chinwiwa Midziyo Uye ...
Yakasiyana-siyana yakajairwa jusi: apple juice, grapefruit j ...
Pasita Machine Uye Spag ...
Mutsetse wekugadzira kubva kune yakasvibirira ingre ...
French Fries Midziyo
Frozen French fries equipmet maitiro kuyerera: Li ...
Yakapfava Candy Machine
Nyoro kendi muchina uye yekugadzira mutsara maitiro ...
Zvomumagaba Hove Zvishandiso
Kuiswa chisimbiso equ. Zvinoenderana nemaitiro akasiyana ...
Kuzvigadzirira Bheri Nyowani Doro ...
Doro rakazvigadzira rinoreva doro rakabikwa na o ...
ice cream yekugadzira mutsara, Ice Cream Equipment 、 Ice Cream Kugadzira Machine
Kuyerera uye hunhu hwe ayizi kirimu yekugadzira mutsara, Ice Cream Equipment 、 Ice Cream Kugadzira Muchina Maererano nemaitiro akateedzana, iyo ice cream yekugadzira mutsara ine inotonhora uye inopisa rwizi, pombi sterilizer, yakanyanya kumanikidza homogenizer, ndiro inotonhorera, inotonhora muchina, yekuzadza muchina , q ...
Brazilian mugadziri wejusi anotarisa kuChina expo yekusimbisa bhizinesi
Mugadziri weBrazil wemiti yemiti yemichero yetropiki inotonhorera DNA Sango ari kuda kuwedzera bhizinesi rayo kune "rimwe divi repasi" nekutora chikamu mune iri kuuya China International Import Expo (CIIE). "Iwo mukana wakanaka kukambani yedu kuti mushe seCIIE inogona kuvhurika ku ...
Kwete. 2011 Xinfeng Road, Fengcheng guta, Fengxian District, Shanghai